Iimpawu zokuncamisa iintlanzi | Ngeentlanzi
Ewe, kuyinyani ukuba igama linokubonakala linomdla. Ewe, masithi ngaphezulu kunomdla, kuba phantsi kwe- ukubamba iintlanzi ifihla a uhlobo Ngokukodwa. Yintoni le kufuneka uyenze kule ntlanzi? Ewe kunjalo, uninzi lweempawu ekufuneka uzijongile.
Okokuqala, kufuneka uyazi ukuba intlanzi eKissing ivela kwimilambo yaseIndiya naseIndonesia. Nangona kunjalo, kuyinyani ukuba ubume bayo bunokufikelela Isentimitha ezingama-30, kwimeko apho inyanyekelwa ngokugqibeleleyo. Imibala yayo yeyesilivere kunye nepinki, nangona iyinyani ukuba ingangumbhoxo.
Kwelinye icala, kufuneka sitsho ukuba umlomo wayo mkhulu, yiyo loo nto ibizwa ngokuba yi-Kissing fish. Nokuba malunga neentlanzi indawo Bahlala benolunya kuhlobo lwabo. Ngapha koko, yenye yezinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo, kwimeko apho sinezinto ezininzi kunye.
Enye idatha esingamele siyilibale kukuba i-aquarium ekuyo kufuneka ibenayo, ubuncinci, i-100 yeelitha, enezityalo ezaneleyo ukuze zikwazi ukufihla, zincamathele emhlabeni. Intlanzi ye-Kissing luhlobo oluthile omnivorous otya ukutya kweflake. Unokutya kwakhona ulwandle.
Su ukuzala akukho nzima nokuba. Nangona kunjalo, kulo msebenzi sicebisa ukuba unxibelelane nengcali, kuba iya kuba nguye onokukunika elona cebo lilungileyo kulo mba. Lo ayingomsebenzi onzima, kodwa zininzi izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo ukuze uphumelele.
Ngamafutshane, intlanzi eKissing inomdla kakhulu, inomdla kakhulu iimpawu ukuba abananto yokumonela ezinye iintlobo. Ngapha koko, ngekhe kumangalise ukuba simangalisiwe zezinye iinkcukacha, ngelishwa, ezingayi kususa umdla wethu wokwazi.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Intlanzi ephuzayo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Intlanzi ephuzayo